သက်ဝေ: ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ (၁)
ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ February 12, 2010 at 6:21 PM
like that so bad!!!
Anyway Happy Holiday Ahead!!!
momiji February 12, 2010 at 6:21 PM
ဆိုင်က Pump တွေထဲမှာ Pump ၄ ခု က အလုပ်မလုပ်လို့ပါ…” တဲ့
အဲ့နေရာအရောက်မှာ အမရာ..အော်ရယ်ပစ်လိုက်တယ်.. ဟားဟား
Kay February 12, 2010 at 9:24 PM
သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောဖူးတယ်..စလုံးတွေက..ဘဲသေ လို့ ၀င်စား တာတဲ့.. ( ဘဲများ..အတန်းလိုက် သွားခြင်း) အီကား စကားချပ်..
မှတ်ချက်.. ရီးဒါး ဒိုင်ဂျက်စ် က.. ယူချင်တယ်တဲ့..။း)
တရုတ်လို ဘာသာပြန်ပြီး လူထုအော်သံကို ပို့လိုက်မယ် ဒန်တန်တန်
Moe Cho Thinn February 12, 2010 at 11:05 PM
ချိုသင်းက ဟောလီးဒေးမို့ ခရီးတွေ ထွက်ကြမှာမို့ ဆီဖြည့်ကြတယ် ထင်နေတာ။ ရီရတယ် ဟားဟားဟားး
khin oo may February 13, 2010 at 12:20 AM
အပြုံးပန်း February 13, 2010 at 12:31 AM
အမ မိုးချိုသင်းတို့လိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေတာ၊
ဒီမှာ ဓါတ်ဆီထည့်ဖို့ အရှည်ကြီး ကျူတာမှ မမြင်ဖူးတာကိုး။
mae February 13, 2010 at 12:40 AM
စက်ာပူက blog တွေတိုင်းမှာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအကြောင်းတွေ ဖတ်ရလို့ အိမ်လွမ်းပြီး ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်နေတာ... မမသက်ဝေ ဓာတ်ဆီဆိုင်ရောက်တော့မှပဲ ရယ်မိတော့တယ်၊
ရုံးပိတ်ရက်မှာ နားနေပါ.. ခေါင်းမကိုက်တော့ဘူး ဟုတ်
P.Ti February 13, 2010 at 1:44 AM
ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ၀င်ပြီး တန်းစီးတာ ဒီမှာထုံးစံလိုဖြစ်နေတာ... အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမပြန်ရရင် သိုးဆောင်းဘာသာကိုပြန်လိုက်မယ်... ဘာမှတ်နေလဲ :D
ရွှေရတုမှတ်တမ်း February 13, 2010 at 7:07 AM
Vista February 13, 2010 at 9:28 AM
ဟိဟိ...တူဒေး နဲ့ မိုင်ပေပါ ကိုဘာဘာပြန်ပို့ လိုက်မယ် ၊တရုတ်လိုပြန်ရင်တော့ ရဒယ်နော် ။ဟက်ဟက်။
T T Sweet February 13, 2010 at 1:11 PM
ဖြစ်မှဖြစ်ရပလေ ... ၂ယောက်သားအဖြစ်ကို မြင်ယောင်ပါတယ်။ ဒီက Kiasu အကျင့်တွေ ကူးကုန်တာလေ ... ဒီမှာလဲ ရှော့ပင်မှာ လူတွေစည်ပြီဆို ဘာတွေများ ဒစ်ကောင့်ချတာလဲဆို အပြေးလေး ၀င်ကြည့်တာ ထုံးစံဖြစ်နေပြီ။
ကိုလူထွေး February 13, 2010 at 7:12 PM
ဒီပိုစ့်ကို တရုတ်ဘာသာတို့၊ ဂျပန်ဘာသာတို့ကိုတော့ ပြန်လို့ရမယ် မဟုတ်လား...
TNS February 13, 2010 at 10:12 PM
ဒီက နော်ဝေဂျင်တွေကတော့ ဖိုးကပ်စေးတွေဗျ..။
မရောင်းရလို့ ဒီဆိုင် အရင်းပြုတ်ပြီး ရှိသမျှပစ္စည်း ဈေးချရောင်းမယ့် ဆိုင်ဖြုတ်ပွဲဆိုရင် ...လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ ဘွားဘွား ဘိုးဘိုးတောင်